Amụma nzuzo - ExoSpecial
Na ExoSpecial, otu n'ime ihe kacha anyị mkpa bụ nzuzo nke ndị ọbịa anyị. Akwụkwọ amụma nzuzo a nwere ụdị ozi nke ExoSpecial anakọtara yana dekọọ yana otu anyị si eji ya. Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ, biko egbula oge ịkpọtụrụ anyị.
Amụma nzuzo a na-emetụta naanị mmemme anyị n'ịntanetị yana ọ dabara maka ndị ọbịa na webụsaịtị anyị gbasara ozi ha kesara na/ma ọ bụ na-anakọta site na ExoSpecial. Iwu a emetụtaghị ozi ọ bụla anakọtara na-anọghị n'ịntanetị ma ọ bụ site na ọwa na-abụghị weebụsaịtị a.
Site n'iji weebụsaịtị anyị, ị na-ekwenye na Iwu Nzuzo anyị ma kwenye na usoro ya.
Anyị adịkarịghị arịọ ndị ọrụ maka ozi nkeonwe ọ bụla. Otú ọ dị, mgbe anyị mere, ozi nkeonwe nke a gwara gị ka o nye, na ihe mere e ji sị gị nye ya, ga-eme ka o doo gị anya n'ebe anyị na-arịọ gị ka ịnye ozi nkeonwe gị.
Ọ bụrụ n’ịkpọtụrụ anyị ozugbo, anyị nwere ike ịnweta ozi ndị ọzọ gbasara gị dị ka aha gị, adresị email, akara ekwentị, ọdịnaya nke ozi ahụ na / ma ọ bụ mgbakwunye ị nwere ike izipu anyị, yana ozi ndị ọzọ ị nwere ike ịhọrọ ịnye.
Anyị na-eji ozi anyị nakọtara n'ụzọ dị iche iche, gụnyere:
Nye, rụọ ọrụ, ma chekwaa weebụsaịtị anyị
Meziwanye, hazie, ma gbasaa weebụsaịtị anyị
Ghọta ma nyochaa otu ị si eji weebụsaịtị anyị
Zụlite ngwaahịa, ọrụ, atụmatụ na arụmọrụ ọhụụ
Gwa gị okwu ozugbo ma ọ bụ site na otu n'ime ndị mmekọ anyị
Ziga gị ozi-e, ozi ederede ma ọ bụ ozi anụ ahụ
Chọta ma gbochie iji webụsaịtị anyị eme aghụghọ ma ọ bụ iwu na-akwadoghị
ExoSpecial na-agbaso usoro ọkọlọtọ nke iji faịlụ ndekọ. Faịlụ ndị a na-abanye ndị ọbịa mgbe ha gara na webụsaịtị. Ụlọ ọrụ nnabata niile na-eme nke a yana akụkụ nke nyocha ọrụ nnabata. Ozi nke faịlụ ndekọ anakọtara gụnyere adreesị protocol ịntanetị (IP), ụdị ihe nchọgharị, Onye na-enye ọrụ ịntanetị (ISP), akara ụbọchị na oge, ibe na-ezo aka/wepụ, yana ikekwe ọnụọgụ ọpịpị. Ejikọtaghị ihe ndị a na ozi ọ bụla nwere ike ịmata onwe ya. Ebumnuche nke ozi a bụ maka nyochaa usoro na ịkwalite saịtị ahụ.
Dịka weebụsaịtị ọ bụla ọzọ, ExoSpecial na-eji 'kuki'. Anyị anaghị arịọ nkwenye gị iji kuki. A na-eji kuki ndị a iji chekwaa ozi gụnyere mmasị ndị ọbịa, yana ibe ndị dị na webụsaịtị onye ọbịa nwetara ma ọ bụ gara. A na-eji ozi a iji kwalite ahụmịhe nke ndị ọrụ site na ịhazi ọdịnaya ibe weebụ anyị dabere na ụdị ihe nchọgharị ndị ọbịa na/ma ọ bụ ozi ndị ọzọ.
Anyị na-eji mgbasa ozi iji kpata ExoSpecial. Ụfọdụ ndị mgbasa ozi na saịtị anyị nwere ike iji kuki na mgbama webụ. Onye ọ bụla n'ime ndị mmekọ mgbasa ozi anyị nwere amụma nzuzo nke ha maka atumatu ha na data onye ọrụ.
Amụma nzuzo Ndị Mmekọ Mgbasa Ozi
Rịba ama na ExoSpecial enweghị ohere ma ọ bụ ịchịkwa kuki ndị a nke ndị mgbasa ozi ndị ọzọ na-eji.
Amụma nzuzo ExoSpecial anaghị emetụta ndị mgbasa ozi ma ọ bụ weebụsaịtị ndị ọzọ. Yabụ, anyị na-adụ ọdụ ka ị lelee amụma nzuzo nke webụsaịtị ndị ọzọ maka ozi ndị ọzọ. Ọ nwere ike ịgụnye omume na ntuziaka ha gbasara otu esi ahapụ nhọrọ ụfọdụ.
Nzuzo CCPA (Agbarala Ozi Nkeonwe M)
N'okpuru CCPA, n'etiti ikike ndị ọzọ, ndị na-ere ahịa California nwere ikike:
Rịọ ka azụmahịa na-anakọta data nke onye ahịa ka kpughee edemede na mpempe data nkeonwe nke azụmahịa chịkọtara gbasara ndị ahịa. Rịọ ka azụmahịa ka ihichapụ data nkeonwe ọ bụla gbasara onye ahịa nke azụmahịa chịkọtara. Rịọ ka azụmaahịa na-ere data nke onye ahịa, ọ bụghị ere nke data nke onye ahịa.
Ọ bụrụ na ị rịọrọ arịrịọ, anyị nwere otu ọnwa ịza gị. Ọ bụrụ n’ịchọrọ iji ikike ndị a, biko kpọtụrụ anyị.
Ihe omuma nke umuaka
Akụkụ ọzọ nke mkpa anyị bụ ịgbakwunye nchebe maka ụmụaka mgbe ị na-eji ịntanetị. Anyị na-agba ndị nne na nna na ndị nlekọta ume ka ha hụ, sonye na/ma ọ bụ nyochaa ma duzie mmemme ha n'ịntanetị. ExoSpecial anaghị akpachara anya na-anakọta ozi njirimara nkeonwe ọ bụla n'aka ụmụaka na-erubeghị afọ 13. Ọ bụrụ na ị chere na nwa gị nyere ụdị ozi a na webụsaịtị anyị, anyị na-agba gị ume ka ị kpọtụrụ anyị ozugbo anyị ga-eme ike anyị niile iji wepụ ngwa ngwa. ozi dị otú ahụ sitere na ndekọ anyị.
Maka ajụjụ ọ bụla gbasara iwu a ma ọ bụ omume nzuzo anyị, biko kpọtụrụ nzuzo@exospecial.com n'oge ọ bụla.